अन्तराष्ट्रिय बाल दिवसको अवसर पारेर आज मात्रै रुसी राष्टपति मिट्रि मेड्भीडेभले (Dmitry Medvedev) रुसमा रहेको केहि दम्पति हरुलाई पितृ मातृ बिभुषण(Order of Parental Honor) बाट सम्मानित गरेका छन् । सात जना भन्दा बढि बच्चाबच्ची जन्माउने दम्पती हरुलाई उक्त बिभुषण बाट सम्मानित गरिएको हो । हाल १४ करोड जनसंख्या रहेको रुसमा , हालकै अनुपातमा जनसंख्या घट्दै जाने हो भने सन २०५० संम्ममा १ तिहाईले जनसंख्या घट्ने छ ।
पितृ मातृ बिभुषण(Order of Parental Honor) पदक, सन २००८ मा राष्ट्रपति मिट्रि मेड्भीडेभले (Dmitry Medvedev)स्थापना गरेका हुन र पहिलो पटक यो पदक सन २००९ को जनवरी १३ तारीखका दिन केहि दम्पति हरुलाई प्रदान गरिएको थियो !
श्रोत : १. बिबिसी तथा ईन्टर्नेट पत्रपत्रीका हरु
३ चित्र श्रोत: http://www.wolframalpha.com/